That's so good, right?: Stuck
အကွာအဝေးက အတော်ကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ လှေကားပါ။ လူများစွာ အတက်အဆင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ် ထဲ ကျဉ်းတယ်လို့ခံစားနေရသလားပဲ။ ဓာတ်လှေကားတွေ နှစ်စင်းသုံးစင်းရှိနေတဲ့ ဒီအဆောက်အဦးကြီးမှာနေထိုင်ပြီး ဒီလိုစကားတွေ ပြောနေရတာက ဓာတ်လှေကားကို ကျွန်တော်မုန်းတီးနေခြင်းက အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့။ ဓာတ်လှေကားဆိုတာ အချိန်မရွေး ပြတ်ကျ သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ သတ္ထုတံခါးနှစ်ခုစေ့သွားပြီး ရုတ်တရက်နိမ့်ကျသွားတဲ့ ခံစားရမှုကလည်း အကြောင်းတစ်ခုပါ။
ဒီနေ့တော့ အရေးတကြီးကိစ္စရပ်ပေါ်လာတာကြောင့် စိတ်တထင့်ထင့်ဖြင့် ဓာတ်လှေကားစီးခဲ့ရပါတယ်။ မကြာခဏ အတက်အဆင်းဖြစ် နေတဲ့ ဓာတ်လှေကားတစ်စင်းဖြစ်ပေမဲ့ အခုလို သူစိမ်းတစ်ယောက်နှင့် စီးလာရတာဆိုတော့ စိတ်ထဲစနိုးစနောင့်ဖြစ်နေမိပါရဲ့။ Shit! မီးပျက်ပြီး ဓာတ်လှေကားရပ်သွားပြီ။ ဘယ်လောက်တောင် သောင်တင်ရဦးမယ်မသိ။ အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ပါ လား။ ပေါင် လယ်လောက်ရှိတဲ့ အားကစားဘောင်းဘီတိုနှင့် တီရှပ်လက်ပြတ်တစ်ထည်ဝတ်လို့။ ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရတာကတော့ gym ကို သူလာနေကြအတိုင်းလာခဲ့ဟန်ပါ။ သူဒီလို ကိုယ်လုံးမျိုးရအောင်ဆိုရင် အချိန်အားရတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေနှင့် လုံးပမ်းနေတာ ပဲဖြစ်မှာ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ ကိုယ်ခန္ဓာကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင် ပြေးတာတို့ စက်ဘီးစီးတာတို့ကို နှစ်အတော်ကြာလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ gym တစ်ခုကို ပုံမှန်သွားဖို့ ကျွန်တော့်မှာ အခက်အခဲရှိနေလို့ပါ။ အဲဒီကို သွားပြီဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တော့မဟုတ် ခပ် မိုက်မိုက်ငနဲတစ်ပွေလောက် ကို ဖန်ဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့တာဗျ။
ကျွန်တော့် ပခုံးပေါ်ကို ချွေးသီးချွေးပေါက်အချို့ကျလာတာကို ခံစားရပါတယ်။ နေရာ ကျဉ်းကျဉ်း ကြပ်ကြပ်တွေကို အသေမုန်းတယ်။ ကျွန်တော့်မှာနေရာ အကျဉ်းအကျပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်အစွဲရှိနေတာပါ။ နေရာကျဉ်းတဲ့ လမ်းမှာဆို လမ်းတောင်သေချာမလျှောက် နိုင်အောင် ဖြစ်မိတဲ့အထိလေ။ ဓာတ်လှေကားနံရံက အေးစက်နေတဲ့ မှန်ချပ်ကို ခေါင်းမှီလိုက်ပြီး yoga class မှာ သင်ယူခဲ့ရသော relaxation exercise တွေကို စတင်လိုက် ပါတယ်။ စိတ်နှင့် ခန္ဓာအတွက် ကောင်းသောအရာလေ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်၊ ပြီးတော့ အကာအရံနံရံမရှိ မြက်ခင်းပြင်ကျယ် တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ရောက်နေခဲ့ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။ ခပ်လေးလေးအသံ တစ်သံ မပေါ်လာခင်ထိတော့ အေးဆေးပါ။
'ဟေး...မင်း အိုကေရဲ့လား? နေသိပ်မကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်'
ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ဖို့ မျက်လုံးတစ်ဖက်ဖွင့်လိုက်ကာ 'ကျွန်တော် အိုကေပါတယ်၊ နေရာကြပ်ကြပ်ထဲ နေနေရတာ မုန်းမိရုံလေးပါ၊ အဲဒါကြောင့် တရားထိုင်တဲ့လေ့ကျင့်စဉ် တစ်ချို့လုပ်နေတာဗျ'
သူ့ကြည့်ရတာ ရယ်ချင်စိတ်ဖြစ်မိသွားဟန်တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြုံးရုံလေးပြုံးပြီး ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ထိုင်လိုက်ပါရော။ ကျွန်တော် သတိ မထားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားထုထည်က အာရုံမစိုက်မနေရပါ။ နေရာကြပ်ကြပ်လူတွေနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်ရတာ ကျွန်တော် မုန်းပေမဲ့ သူ့လိုလူတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နံဘေးထိုင်နေတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် စတင်နှိုးဆွနေသလို ခံစားရ ပါတယ်။
'Hi ငါက သူရိန်ပါ' သူ့လက်တစ်ဖက် ကမ်းလာတော့ ကျွန်တော်လည်း လှမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။
ဆုပ်ညှစ်ထားတဲ့ သူ့လက်တွေဟာ အတော်သန်မာပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးထက် သူ့ဟာက နှစ်ဆရှိမလားပဲ။ သူ့ဟာတွေအားလုံး ဒီလိုကြီးမလား ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိပါရဲ့။ သူ့လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုဟာ နည်းနည်းကြာနေတော့ ထူးထူးထွေထွေ ကျွန်တော် ထပ် မစဉ်းစားဘဲ သူ့ကိုပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ ညှို့ငှင်ဖျားယောင်းတဲ့ သူ့အပြုံးကို ပြန်တွေ့ရချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဗျာများသွားရပါရော။ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တာနဲ့တင် ကြွေဆင်းသွားပါပြီ။
'Hi! ကျွန်တော်က ချမ်းငြိမ်းပါ'
ကပိုကရို ပခုံးတစ်ဝိုက်ကျနေတဲ့ ဆံနွယ်ခွေတွေ၊ နှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံ့ပြီး ပြုံးလိုက်တော့ ပေါ်လာတဲ့ ပါးချိုင့်နှစ်ဖက်ကြောင့် နစ်မျောသွား တာ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းလိုက်နိုင်ဘူး။ ဒီလူ သူ့အသွင်အပြင် သူ့ဟန် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သံသယမရှိဖွယ်ပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေကြား ပေါ်ပြူလာ သေချာပေါက်ဖြစ်မှာ။ ရုတ်တရက် သဘောတကျဖြစ်ပြီး သူရယ်မောစေမဲ့ စကား လုံးတစ်ခုပြောဖို့ ကျွန်တော် ပါးစပ်ဟလိုက်ပေမဲ့ မပြောဖြစ်ဘဲ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ပေါင်ကြားက ထကြွနေတဲ့အရာကို သူသတိမပြုမိ စေဖို့။
'ချမ်းငြိမ်း? အဲဒါ ငါ့ ex ရဲ့နာမည်ကြီးပဲ' စိတ်ဆိုးဟန်ပြအကြည့်ဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောသေး။
နောက်ဆုံးကြားခဲ့ရတဲ့ သတင်းအပိုင်းအစလေးကို လျစ်လျူရှုဖို့ ကြိုးစားဖို့ခက်သားပါ။ သူ့ ex လို့ ပြောခဲ့သလား? ချစ်စနိုးနဲ့ အတို ကောက် ခေါ်ခဲ့တဲ့ ex? ချမ်းငြိမ်းသူဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကို ချမ်းငြိမ်းလို့ အတိုကောက်ခေါ်ခဲ့ခြင်းပေါ့။
'တောက်! မီးပုံဘေး မီးလှုံနေရသလိုပဲ ပူလိုက်တာ'
ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မပြောခင်မှာပဲ သူ့အပေါ်အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်ကာ ရင်အုပ်ပေါ်က ချွေးတွေကို သုတ်နေရဲ့။ ကောက်ကြောင်းတွေပေါ် နေတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေပါလား။ ခပ်ကြီးကြီး နို့သီးခေါင်းတွေဆီအကြည့်မထိန်းနိုင်ရောက်သွားမိတယ်။ နို့သီးခေါင်းတွေဘေးမှာအမွှေး နုလေးတွေ ၀ိုင်းပေါက်နေသေးတာ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ရုတ်တရက် မထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင် မာတောင်လာပါတယ်။ အဲဒါကို ဖုန်းကွယ်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားပေမဲ့ နီးကပ်နေတဲ့ အနေအထားကြောင့် မလွယ်ကူပါဘူး။
ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးကို အကြည့်ကစားနေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်း မာတောင်နေတဲ့အရာဆီအရောက် ရပ်တန့်သွားတာကို ခံစားမိရဲ့။ သူ့ နှုတ်ခမ်းမှာ အပြုံးတချို့တွဲခိုလာတယ်။ ကျွန်တော် အေးစက်နေတဲ့ နံရံပေါ်က မှန်ချပ်ပေါ်ပြန်မှီလိုက်ရင်း မျက်လုံးတွေပိတ်လိုက်ပါ၏။ ပူနွေးနေတဲ့ သူ့လက် ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ ရွေ့လာနေတာတကယ်ပါ။ သူ့လက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ပေါင်ခြံနှင့် နီးကပ်လာရင်း ကျွန်တော့်ငပဲ ခပ်မာမာဆီမှာ ငြင်ငြင်သာသာ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော့် မျက်စိတွေဖွင့်ဖို့ ငြင်းဆန်နေဆဲပါ။ ဘာများဆက်ဖြစ်ဦးမလဲလို့လေ။ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို သူဆွဲယူလိုက်ရင်း သူ့ ပေါင်ခြံတွင်းကို ထားလိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲဟာ ပျှမ်းမျှဆိုဒ်ရှိတဲ့ တစ်ခုပါပဲ။ သိပ်မတုတ်သောပစ္စည်းပေါ့။ သူချီတုံချတုံမဖြစ်ဘဲ ၀တ် ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကိုလျှောချလိုက်ကာ ငပဲရှည်ရှည်ကို လေထုထဲ မြှားတစ်စင်းဖြစ်စေပါတယ်။ မျက်လုံးမှေးထားတာ ပြူးကျယ်သွား ရကာ အသက်ရှူမူမမှန် ဖြစ်သွားရတာပေါ့နော်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားတစ်ခုလုံး ချောမွေ့လိုက်တာ။ အမွှေးအမျှင်နည်းလှချည့်။ မာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ တထိတ်ထိတ်ဖြစ်စေပါရဲ့။ ခေါင်းလောင်းပုံသဏ္ဌာန် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝမှာ အရည်ကြည်လေးတွေ စို့ထွက်နေသား။ ကြာရှည်ကျွန်တော်တင်းမထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ အရည်ကြည်လေးတွေ စို့နေတဲ့ ငပဲကို ငုံစုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပါးစပ်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဟကာ သူ့ပစ္စည်းကြီး အာခံတွင်းထဲထိအောင် သွင်းလိုက်တာ အောက်ခြေထိရော နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့်။ သူ့ ကိုယ်လုံးကို လက်များဖြင့်ပွတ်သပ်ကြည့်တော့ ချောမွေ့လိုက်တာဗျာ။ လုံးဝန်းနေတဲ့ရွှေဥတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေဖြင့် စက္ကန့်နည်း နည်းလောက် ပွတ်သပ်ကစားရတာလည်းကောင်းသားပါ။ သူတော်တော် အတွေ့အကြုံမရှိတာဘဲ။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများဖြင့် ပွတ် သပ်နှိုးဆွမှုကို ကောင်းကောင်းတုန့်ပြန်တယ်။ သူ့ငပဲကို အာခံတွင်းထဲကထုတ် နှုတ်ခမ်းဖျားများဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်း စုတ်မှုတ်လိုက်ကာ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းခြင်း လျှာဖျားကြား လူးလိမ့်စေပါတယ်။ သွေးကြောများ တဆတ်ဆတ်ခုန်လာကာ သူ့ငပဲ ပိုမို နီရဲလာရင်း ပြီးဆုံးတော့မယ့်အရိပ်အရောင်ပြပါပြီ။
သူ့နှုတ်ခမ်းက မိန့်မူးသံကလည်း တဖြည်းဖြည်းကျယ်လောင်လာပါတယ်။ သူ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲယူထားတဲ့ စက္ကန့်အနည်း ငယ်အတွင်းမှာပဲပေါ့။ ကျွန်တော့်လျှာစွမ်းအာစွမ်း အကြား သူအမှန်တကယ်နစ်မျောနေတာပါ။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွကိုက်ထားရင်း လျှာဖျားလေးနှင့် အပေါက်ဝလေးကို ကလိဖြစ်တာမှာ သူ တွန့်တွန့်လူးပါပဲ။ ခပ်ရှည်ရှည်ငပဲကို အရင်းကဆုပ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ပြီး အထက် အောက် လှုပ်ရှားပေးတာက တစ်ပြိုင်တည်းလိုလိုပေါ့။ အရည်ကြည်တွေ၊ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းက အရည်တွေဖြင့် သူ့ငပဲမှာ ချောမွေ့ လို့။ ခပ်သွက်သွက် သူ့ငပဲကို အာခံတွင်းထဲ အသွင်းအထုတ်ပြန်လုပ်ပေးရချိန်မှာတော့ ပစ္စည်းက ပိုတုတ်လာသလို ခံစားရကာ သူ့ လက်များဟာ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ပြီး ခါးကိုကော့ကာ အာခံတွင်းထဲ ဖိသွင်းဖိထုတ်လုပ်ပါတော့တယ်။ အားရဖွယ် တင်ပါးဆုံ ကို ညှစ်မိစဉ်မှာတော့ ရုတ်တရက်အပြင်ကို ငပဲအားဆွဲထုတ်လိုက်ကာ မျက်နှာပြင်ပေါ် အားရပါးရ ပန်းထုတ်ပါရော။ 'အား...အ...အ' ချွဲပျစ်သော အရည်များစွာ။
နောက်ဆုံးတစ်စက် သူပန်းထုတ်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ ပြန်ထည့်ပြီး လျှာနှင့်ပြန်ရစ်နေလိုက်တာ ပျော့သွားတဲ့အထိပါပဲ။ ပါးပြင်ပေါ်ကအရာတွေ သန့်ရှင်းပြီးသွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများဟာ သူ့နှုတ်ခမ်း ထူအမ်းအမ်းလေးများဆီပေါ့။ သူ့လျှာဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းထဲမှာ တိုးဝင်ကာ အာခံတွင်းအနှံ့မွှေသေးရဲ့။ အတူတကွ အေးစက်နေတဲ့ ဓာတ်လှေကား ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲလျောင်း မိကြတော့ သူ့ခြေထောက်များဟာ ကျွန်တော့်ကိုချုပ်နှောင်ထားသလိုပါပဲ။ အားနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ သူ့နောက်ပိုင်း ကြွက် သားများကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မိသပေါ့။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာ တင်းရင်းတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတာဗျ။ တင်းရင်းဝိုင်း စက်ပြီး လှပလွန်းတဲ့ တင်သားဆိုင်များကို ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများဖြင့် ပွတ်သပ်မိချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မာန်ဟုန်ထလာ တယ်။ တင်သားဆိုင်များကို ဖျစ်ညှစ်၊ အနည်းငယ်ဖြဲကာ လက်ခလယ်ကို သူ့ခရေပွင့်အနားသတ်များကို ပွတ်သပ်မိပါသေးတယ်။ ခပ် တင်းတင်းလေး ဖိကြည့်မိရင်း ကစားမိတာပေါ့။
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းအချို့ကို ခရေပွင့်ထဲ ဖိပြီးသွင်းလိုက်ချိန်မှာ ဓာတ်လှေကား ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပါတယ်။ မီးတွေ ဖျက်ကနဲ ဖျက်ကနဲ ပွင့်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား အမြန်လှုပ်ရှား အ၀တ်ဝတ်ကြရသည်ပေါ့။ ဓာတ်လှေကား အရှိန်သေပြီး ရပ် တန့်သွားချိန်မှာတော့ ဓာတ်လှေကားတံခါးကို ဖွင့်ပေးဖို့ သူစိမ်းနှစ်ဦးစောင့်နေရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ Lobby ကိုရောက် အပြင်ကိုထွက်ခွင့် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနှောင့်အယှက်ပြုခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ဓာတ်လှေကားအပြင်ကို ထွက်ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာစရာ လေ။
ကျွန်တော် သူ့ဘက်ကို မျက်နှာမူလိုက်တော့ စကားလုံးတွေ ထွက်ကျလာတယ်။ ကျွန်တော့် နားရွက်နားကို အသာတိုးကပ်ပြီး လေသံ ခပ်တိုးတိုးဖြင့် 'ငါ့နေရာကို ဆက်သွားဖို့ ဖြစ်မလားဟင်?' လို့ပြောရဲ့။
ကျွန်တော် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း 'ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ရိုးရိုးလှေကားကပဲ သွားမယ်နော်' လို့။
Alex Aung (19-1-2011)